နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: ဒီသင်္ကြန်
thar du. thar du. thar du....
သာဓု သာဓု သာဓု ....... ခေါ်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရေ.... ဒို့တွေ မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ အလုပ်ကို သိတတ်စွာ လုပ်ခဲ့လို့လည်း လေးစားမိပါတယ်။
သာဓု ၃ကြိမ်ခေါ်ပါတယ် မကြီးရေ...
သိင်္ဂါရေ သာဓု သာဓု သာဓုပါ။
အိုး သိင်္ဂါလဲ သီလရှင်ဝတ်ဖြစ်တယ်လား
တရားရဲ့ အရိပ်နဲ့ အေးချမ်းခဲ့တဲ့အချိန်အခါလေးတွေကို
သာဓု...သာဓု...သာဓု ခေါ်ပါတယ်.။ အားလည်းကျ
ပါတယ် သိင်္ဂါရယ်..။ နောက်လည်း တရားရဲ့အရိပ်မှာ
ခိုလှုံနိုင်ပြီး သာသနာအကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်ပါစေ..။
ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာ ဆိုတဲ့ ကြွေးသစ်ချနိုင်ပါစေလို့
အန်တီက သူ့သမီးကို ကြည့်ပြီး သဘောကျကျေနပ်နေပုံပဲနော်... :D
သာဓု သာဓု သာဓု.. စကားမစပ် အလှူငွေတော်တော်ရခဲ့လား.. :P
သီလရှင် ဝတ်ခဲ့တဲ့မမကို တကယ်ပဲ လေးစားမိပါတယ် =)
အစ်မရေ ...ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်နဲ့ကို သာဓုခေါ်သွားပါတယ် ..။
ကိုယ့်မှာတော့ အရှုပ်တွေလုပ်ပြီး ပူနေချိန် အစ်မပိုစ့်လေးက ဖတ်လိုက်ရတာတောင် အေးချမ်းတယ် ။ တကယ် တရားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ အစ်မကိုယ်တိုင် ဘယ်လောက်အေးချမ်းမယ်ဆိုတာ တွေးပြီး အားကျမိပါတယ်..။
သာဓု သာဓု သာဓုဗျာ
မွန်မြတ်တဲ့ ကုသိုလ်ယူ တရားရှာရင်း သင်္ကြန်ကာလကို ဖြတ်သန်းခဲ့တာ သိပ်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ ဖြတ်သန်းမှုပါပဲ။
သိပ်ကောင်းတာဘဲ သာဓု ပါနော်
အရမ်းကောင်းတာပဲ ညီမရေ သာဓုပါရှင်
သာဓု သာဓု သာဓုပါမမ